Fanakanan-dalana :: Valo lahy nandroba taksiborosy • AoRaha
Fanakanan-dalana Valo lahy nandroba taksiborosy
Nosakanan’ny andian-jiolahy valo ny taksiborosy iray marika “Mercedes Sprinter” nandeha tany amin’ny lalam-pirenena faha-44, mampitohy an’Amparafaravola sy Moramanga, omaly maraina. Tifi-danitra, sakan-dalana tamin’ ny vato sy hazo no nampijanonan’ireo mpanafika ny fiara.
Notadiavin’izy ireo tao ny lehilahy iray mpandeha. Voaroba ny vola enina hetsy ariary teny aminy. Lasibatra ihany koa ny mpandeha sasany. Nanao fanamiana toy ny an’ny mpitandro filaminana ireo jiolahy, araka ny fitantaran’ireo lasibatra tamin’ny mpitandro filaminana.
“Efa elaela no tsy nisy fanafihana fiara tany amin’iny lalam-pirenena faha-44 iny. Tranga hafa ity niseho ity satria olona iray no tena nokendren’ireo olon-dratsy tao anatin’ny taksiborosy. Misy ny fepetra efa noraisinay, hatramin’izay, ho fisorohana ny asa ratsy any amin’iny lalam-pirenena iny, toy ny fanaovana fisafoana, fanaparitahana ny laharana finday hanamora ny fifandraisana amin’ny zandary sy ny mponina”, hoy ny lehiben’ny zandary any Alaotra Mangoro.
Voalaza fa efa misy olona ahiahiana tamin’ity fanafihana taksiborosy ity. Mitohy ny fikarohana ataon’ny mpitandro
Razana roa sosona :: Novonoin’ny fokonolona ilay lehilahy nahafaty ny vadiny
Mahajanga :: Nanaitra ny fahitana taovam-biby avy tany an-dranomasina